Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa Xukunno kala duwan ku ridday wariyaal maanta la horgeeyay Maxkamadda. | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa Xukunno kala duwan ku ridday wariyaal maanta la...
Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa Xukunno kala duwan ku ridday wariyaal maanta la horgeeyay Maxkamadda.
Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa maanta dhagaysatay eedaymaha 5wariye oo la horgeeyay maxkamadda, kuwaasi oo ku eedaysanaa eedaymo kala duwan,Maxkamadda ayaa ugu horeen dhagaystay dacwaddii loo haystay agaasimaha Idaacadda Shabeele Cabdimaalik Yuusuf oo lagu soo eediiyya baahinta warar been ah iyo wax u dhimista amniga.
Waxaa kaloo la dhigaystay Agaasimihii idaacadda SKY iyo laba wariye oo kale waxaana xeer ilalaintu ay dhamaan suxufiyiinta ku soo ogeen eedamo kala duwan oo salka ku haya baahinta warar aan xaqiiqda ku salaysnayn.
Maxakamdda Gobolka ayaa dhagaysi kadib waxa ay ridday xukunno kala duwan oo ahaa dhamaantood kuwa lacageed ,Maxkamadda ayaa ku xukuntay agaasimiaha Shabeele Cabdimaalik Maxamuud lacag dhan 10.000 doolar iyo inta uu horay u xirnaa,Maxamuud Maxamed Daahir Carab ayay ku xukuntay 2.000 doolar iyo inta uu horay u xirnaa wariye Axmed Cabdi Xasan ayay ku xukuntay 5.00 doolar iyo inta uu horay u xirnaa halka wariye ku eedaysnaa siidaynta warar ku saabsan xanuunka Epola lagu xukumay 5.00 doolar.
Maxkamadda ayaa waxa ay dib u dhigtay dhagaysiga Wariye Maxamed Bashiir Xaashi oo ka midahaa wariyaasha ku xiran Xabsiga dhexe ee Xamar
Previous articleQaar kamida dhaawacyadii Centeraal oo loo qaaday Dalka Imaaraatka.
Next articleDowladda Soomaaliya ayaa War ka soo saartay Shirka Istanbuul.